Berbera oo laga masaafuriyay nin Somali badan gaaleeyay - ARAABINEWS.COM | ARAABINEWS.COM
Waxa magaalada Berbera ee maamulka Somaliland laga masaafuriyay nin gaaleeyay Somali badan kadib markii uu isticmaalay khayaano iyo lacag. Ninkaan ayaa dadka masaakiinta siin jirey lacag kuna oran jirey mu diirsada diibtiina.
Ilaa burburkii qaranka waxa gaaladu ku guulaysteen inay ka faaiideystaan Somalida baahan kadibna lacag kaga badashaan diintooda.
Isu-duwaha Wasaaradda Diinta iyo Awqaafta Somaliland ee Gobolka Togdheer Maxamed Xuseen oo Maanta Saxaafadda la hadlay ayaa sheegay in Ninkaasi uu Ganacsi ahaan kusoo galay Magalada Berbera,hayeeshee Maamulka Gobolka uu baaritaan dheer ku sameeyay,kadib markii la ogaadayna la musaafuriyay.
“Muddo laga joogo laba bilood, Nin dhalashadiisu tahay Maraykan oo muddo sannad ah joogay waddanka, Ninkaasi wuxuu waddanka ku soo galay sifo Ganacsi, si Sharci ahna Waddanka wuu ku soo galay laakiin waxaana ogaanay in uu faafinaayay Diinta gaalada waana la musaafuriyay ayuu yiri Isu-duwaha Wasaaradda Diinta iyo Awqaafta Somaliland ee Gobolka Saaxil.